Badda oo kusoo fatahday degmo qadiimi ah oo ka mid ah Puntland - Caasimada Online
Home Warar Badda oo kusoo fatahday degmo qadiimi ah oo ka mid ah Puntland
Badda oo kusoo fatahday degmo qadiimi ah oo ka mid ah Puntland
Dadka degan degmada Caluula ee maamulka Puntland ayaa qeyla dhaan iyo codsi u diray maamulka Puntland kadib markii ay badweynta kusoo furan oo qeyb ka mid ah degmada bad noqotay.
Wararka laga helaayo degmada Caluula, waxay xaqiijiyeen in qayb kamid ah magaalada ka mid noqotay badda iyadoo biyuhu soo galeen guryo badan islamarkaana la tageen ku dhawaan 20 kamid ah doonyihii Kalluumaysatada.
Arrintan ayaa timid kadib markii Ciid ay xirtay Kannaal biyuhu gali jireen xilliyada baddu kacsantahay, taasoo sidoo kale ay miciirsi usoo raadsan jireen noolaha Kalluunku kamid yahay ee ku jira Badda.
Gudoomiyaha degmad Caluula ee gobolka Gardafuu Cali Shire Maxamud Cusmaan, ayaa sheegay in dowladdu ka jawaabi la’dahay baaqyo ay dirayeen ilaa bishii Afaraad ee lasoo dhaafay.
Wuxuu sheegay inay xiriir la sameeyeen dhammaan golayaasha maamulka Puntland oo ay ugu dambaysay baaq ay usoo direen wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, balse ilaa hadda aysan u muuqan saan saan lagu caawinayo iyo jawaab ay helayaan.
Muuqaalo laga helaayo degmada Caluula ayaa muujinaya guryo badan oo galay badda kadib markii biyuhu kasoo tallaabeen xadki ay joogeen, waxaana laga cabsi qabaa in degmada gabi ahaanteeba qarsoonto.
Guddoomiyaha Caluula, oo haatan ku sugan magaalada Bosaso ayaa tilmaamay in hadii aan dhaqso wax looga qaban dhibkaas arrintu noqon doonto mid aan waxba laga qaban karin oo sababi karta in magaaladu isu badasho gabal kamid ah Badweynta.
Ilaa hadda wax war ah kama soo bixin maamulka Puntland, mana muuqata saansaan lagu badbaadinaayo dadka deegaanka oo halis ugu jira in baddu la tagto.